भिडियोमा हेर्नुहोस् चलचित्र 'साइँली'को ट्रेलरमा गौरव र मेनुकाको प्रेम, दयाह्याङको भुमिका के छ ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more भिडियोमा हेर्नुहोस् चलचित्र 'साइँली'को ट्रेलरमा गौरव र मेनुकाको प्रेम, दयाह्याङको भुमिका के छ ?
भिडियोमा हेर्नुहोस् चलचित्र ‘साइँली’को ट्रेलरमा गौरव र मेनुकाको प्रेम, दयाह्याङको भुमिका के छ ?
फागुन २० गते, २०७५ - १०:३१
काठमाडौं । हेमन्त रानाको चर्चित गीत ‘साइँली’ बाट शिर्षक सापटी लिई निर्माण गरिएको फिल्म साईँलीको ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । सार्वजनिक ट्रेलरमा प्रेम , बिवाह र त्यसपछि आउने आर्थिक समस्याको कारण बिदेशीनु परेको पीडालाई देखाईएको छ । बैदेशिक रोजगारीको कथालाई नै उठान गरिएको यस फिल्ममा मेनुका प्रधान ,गौरव पहाडी , दयाहाङ राई कृपा सिंहको मुख्य भुमिका रहेको छ । जिएच इन्टरटेनमेन्टको व्यानरमा निर्माण भएको फिल्ममा माओत्से गुरुङप्रकाश घिमिरे, अरुण कार्कीलगायतका कलाकारको पनि अभियन रहेको छ ।
रामबाबु गुरुङले निर्देशन गरेको गरेको यस फिल्मको कथा गुरुङकै रहेको छ भने विशाल गुरुङ र मोहन थापा निर्मातामा रहेका छन् । बिजय अवाले, विकाश पुजास र सुवेक्छा केसी सह-निर्माताको रहेको फिल्मको कार्यकारी निर्माता मणिराज पोखरेल हुन् । “सालको पात टपरी” बोलको गीतको कारण चर्चामा रहेको साईँली चैत्र १५ बाट अल नेपाल रिलिज हुँदैछ
फागुन २० गते, २०७५ - १०:३१ मा प्रकाशित